Side tafura Vagadziri & Vatengesi - China Side tafura fekitori
Tafura yekudya kwemanheru
Girazi Crystal Girazi Round Co ...
Yakapfava girazi tafura yeKofi
Decorative Crystal Glass Si ...
Yemazuva ano uye Yakasarudzika Metal Con ...
Nhema Huru Girazi Rutivi Tafura
Tafura yeparutivi yakaiswa padyo nesofa, tinogona kuisa zvimwe zvinhu zvidiki pairi, zvinogona kushandiswa sekushongedza kumba.
Kutaura nezve tafura yepadivi, vanhu vazhinji vanoziva nezvayo vanongogara mune zvisingaite "tafura diki yetii", asi nekuvandudzwa kwakasiyana-siyana kwemaitiro epamba, tafura yepadivi yave chinhu cheimba chisingatarisirwe.
Yakasarudzika Kukanda Girazi yepamusoro Tea Rutivi Tafura
Tafura yeparutivi padivi pasofa ndiyo imwe yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya muimba yekutandarira. Chiedza chakapfava panguva yekuzorora, mabhuku aunoverenga munguva yako yekuzorora, mweya nyowani unounzwa nemaruva uye zvirimwa kumhuri yako, uye tafura diki yekwere inogona kugutsa fungidziro yako yehupenyu. Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa.
Girazi Rutivi Tafura yeGirazi Fenicha
Tafura yeparutivi padivi pasofa ndiyo imwe yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya muimba yekutandarira. Chiedza chakapfava panguva yekuzorora, mabhuku aunoverenga munguva yako yekuzorora, mweya nyowani unounzwa nemaruva uye zvirimwa kumhuri yako, uye tafura diki yekwere inogona kugutsa fungidziro yako yehupenyu. Kanda girazi / girazi rakaumbika rinozivikanwawo segirazi regirazi, girazi rakaumbwa girazi, girazi rakavezwa girazi, iro rinopisa kune imwe nhanho yetembiricha kuitira kugadzirwa, fiyuzi kana kukombama, nokudaro crate yakasarudzika mapatani pagirazi pamusoro. Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa. Yekutsamwa, zvinoenderana nemapatani ari pagirazi pamusoro, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo Aqua clear / Ultra clear / Blue / Green / Grey / Tea / Painting / Printing
Yakashongedza Crystal Girazi Rutivi Tafura
Sezvineiwo, tafura yepadivi inofanira kunge yakaenzana kana kungori pazasi peruoko rwechigaro chiri padyo nayo. Kwete chete iyo inogadzira yakanaka yekuona kuyerera mukamuri, iyo tafura iri mukati nyore kusvika kwekumisikidza chinwiwa pasi kana kubatidza mwenje. Standard sofa ruoko marefu anogona kubva pakati pe24 ne 32 inches, saka buda yako yekuyera tepi.
Matanda, simbi kana Girazi? Square kana round? Masherufu kana madhirowa? Yakakwirira kana yakaderera? Uine sarudzo dzakawanda kudaro, kusarudza kurudyi tafura yepadivi kunogona kutyisa. Saka isu tagadzira mamwe akareruka marongero ekukubatsira iwe kuti uwane kukanda chaiko.
Tafura yeparutivi padivi pasofa ndiyo imwe yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya muimba yekutandarira. Chiedza chakapfava panguva yekuzorora, mabhuku aunoverenga munguva yako yekuzorora, mweya nyowani unounzwa nemaruva uye zvirimwa kumhuri yako, uye tafura diki yekwere inogona kugutsa fungidziro yako yehupenyu.
ICE ROUND SIDE TABLE
Chiumbwa chesimbi chakavezwa chinosimudza chirabwe chegirazi chakakora uye chakakombama sedombo rechando, chinokoka mwenje kuti chipfuure nepakati uye nekukwirisa pamusoro pacho, kuchichinja zuva rese. Yakagadzirwa kune zvakatemerwa maratidziro egirazi tenzi, tafura yega yega ibasa reunyanzvi uye inosimbisa maitiro egirazi rakagadzirwa nehunyanzvi hunyanzvi. Iyo yakasviba girazi rakaumbwa inoita kuti chisikwa chimwe nechimwe chisarudzika chimwe cherudzi.
Kudhinda Girazi Diki Side Tafura
Kanda girazi / girazi rakaumbika rinozivikanwawo segirazi regirazi, girazi rakaumbwa girazi, girazi rakavezwa girazi, iro rinopisa kune imwe nhanho yetembiricha kuitira kugadzirwa, fiyuzi kana kukombama, nokudaro crate yakasarudzika mapatani pagirazi pamusoro. Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa. Yekutsamwa, zvinoenderana nemapatani ari pagirazi pamusoro, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo
Aqua Yakajeka / Ultra Yakajeka / Bhuruu / Girinhi / Grey / Tea / Kupenda / Kudhinda
12, Small Glass Side Tafura
Tafura yeparutivi yakaiswa padyo nesofa, tinogona kuisa zvimwe zvinhu zvidiki pairi, zvinogona kushandiswa sekushongedza kumba. Tafura yeparutivi padivi pasofa ndiyo imwe yemidziyo inoshandiswa zvakanyanya muimba yekutandarira. Chiedza chakapfava panguva yekuzorora, mabhuku aunoverenga munguva yako yekuzorora, mweya nyowani unounzwa nemaruva uye zvirimwa kumhuri yako, uye tafura diki yekwere inogona kugutsa fungidziro yako yehupenyu. Kanda girazi / girazi rakaumbika rinozivikanwawo segirazi regirazi, girazi rakaumbwa girazi, girazi rakavezwa girazi, iro rinopisa kune imwe nhanho yetembiricha kuitira kugadzirwa, fiyuzi kana kukombama, nokudaro crate yakasarudzika mapatani pagirazi pamusoro. Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa. Yekutsamwa, zvinoenderana nemapatani ari pagirazi pamusoro, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo Aqua clear / Ultra clear / Blue / Green / Grey / Tea / Painting / Printing
Makara Crystal Girazi Rutivi Tafura
Kanda girazi / girazi rakaumbika rinozivikanwawo segirazi regirazi, girazi rakaumbwa girazi, girazi rakavezwa girazi, iro rinopisa kune imwe nhanho yetembiricha kuitira kugadzirwa, fiyuzi kana kukombama, nokudaro crate yakasarudzika mapatani pagirazi pamusoro.
Tafura yepadivi ine yepamusoro pamusoro - muPepuru, Girinhi, Grey uye orenji - inotamba nekutenderera uye kugadzirwa kwegirazi, inorapwa uchishandisa yakakosha fusion maitiro, ndiyo inosarudzika tafura yekofi.
Yakagadzirwa nesimbi, tafura iyi ine imwechete-chidimbu korona-yakaita furemu mune yakabwinyiswa chrome kana kupendwa Nhema kupera, nemakumbo akapetwa akananga kuzasi. Iko kugona kwekubata kwepamusoro, iine wavy zvishoma pamusoro pehunhu hwezvimedu mugirazi rakasanganiswa, inopesaniswa nepurasitiki yemafomu, ichipa chinhu chakareruka chinopa nekunzwa kwekuveza.
Tafura yekofi inowirirana zvakakwana neSofa renji, kunyanya yakanakisa Sofa.
FUSED Girazi RUDUKU RUDZIDZISO
Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa. Yekutsamwa, zvinoenderana nemapatani ari pagirazi pamusoro, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Makara achikanda girazi rerutivi tafura
Alwa matafura ane tafura yetafura yakagadzirwa negirazi yakakandwa. Iyo girazi remvura rinosara mune yakakosha simbi muforoma kuti isimbise kwemazuva akati wandei. Iwo mafuro emhepo mugirazi anopa tafura yega yega patafura yakasarudzika hunhu. Iko kutaridzika kunotevedzera kunaka kwemvura. Tafura yeparutivi inowanikwa nemabhesi matatu akasiyana mumatanho maviri. Yakagadzirwa nemaoko muChina.
Diki ine simba rakakura, iyo Tafura inoratidzira kofi nematafura epadivi ayo anofadza seanofadza sezvaanoshanda. Inoshandisa yakakosha girazi nzira yekugadzira kugadzira iyo 50mm gobvu petafura inoshandiswa patafura yega yeAlwa. Iyo girazi remvura rinodururwa muforoma yesimbi uye ndokusiiwa richisimbisa kwemazuva akati wandei, zvobva zvazadziswa neyakagadzika simbi yeupfu-yakavharwa simbi kana girazi resilinda yegirazi. Zorora zviri nyore uchiziva kuti chero iwe chaunoisa pamusoro peichi chitarisiko chisina kusimba, asi yakasimba fenicha iri mumaoko akanaka.
Diki Rutivi Tafura Girazi
Solid graphite yakakanda girazi dhisiki tafura misoro yakabatanidzwa neboxy madota mabhesheni.
Tafura yega yega yepamusoro yakakandwa nemaoko ane puckered inoitika segirazi rinopisa parinotonhora mu'foroma, zvoita kuti chidimbu chimwe nechimwe chisarudzike.
Tafura mabhesheni akavakwa kubva kune yakasimba ash uye inogona kushandiswa kuratidza mabhuku uye zvinhu.
Inowanikwa padivi, kofi uye yakasarudzika tafura saizi inosanganiswa pamwe nesarudzo yemafuta akajeka kana echinyakare stain kupera. Tsika dzakagadzirwa girazi zvakare zvinogoneka.
Kazhinji inodzikisirwa nekuda kwekuenderana mukukanda girazi kwakazara, mamaki anotonhora anomuka kana girazi rakanyungudika rikasangana nechitonho.
Aya mamaki anotonhora, ayo anosiyana neforoma zvinhu uye tembiricha, ndiwo manyuko ekurudziro kune edu Drift mwenje nemidziyo yemidziyo.
Imwe neimwe yakasimba girazi petafura inodada inoratidza yakasarudzika echos yekugadzira maitiro uye yakapetwa neiyo shoma base.
Girazi yepamusoro yakazvarwa kubva kuchido chekuyedza chigadzirwa chisingaenderane zvachose, ichidudzira patsva tsika yemireniyumu mukiyi yemazuva ano. Iko kunetseka kwekugadzira kunowanikwa mune yekukanda nzira inovavarira kuwana hombe uye gobvu regirazi pamusoro, ita ichi chidimbu chinhu chakasarudzika zvechokwadi. Iyo yepamusoro inotsigirwa neplate yesimbi iyo inosimbisa iwo maratidziro echikamu chepazasi chegirazi, chakaita semabvu egungwa. Iyo cylindrical base ine akati wandei matete esimbi tsvimbo dzakabatana kune imwe neimwe.
Brushed base base nechigaro chegirazi chakakandirwa
Solid graphite yakakanda girazi dhisiki tafura misoro yakapetwa nesvina simbi mabheseni.
Imwe neimwe yakasimba girazi petafura inodada inoratidza yakasarudzika echos yekugadzira maitiro uye yakapetwa neiyo shoma base
Iyo Crystal Cast Girazi Alwa Tafura
Foshan Zhitao Girazi Fekitori
Runhare: 0086 17725634560